Miyaad ka fikireysaa inaad u wado Uber ama Lyft? Hubso inaad ka fekereyso caymiska! - Amjambo Africa
U wadida Uber, Lyft, iyo adeegyada kale ee kireysiga-kirada ah waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu kasbado dakhli. Laakiin qofkasta oo ka fikiraya wadista kireynta waa inuu marka hore fahmo sida tani u shaqeyso ee la xiriirta caymiska gaariga. Sababtoo ah adeegyada kireynta-kiradu ma laha ama kuma shaqeeyaan gawaarida, ulama dhaqmaan wadayaasha sidii shaqaale. Sidaa darteed, qof kasta oo u kaxeeya adeegyadan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay qandaraasle madax-bannaan, taas oo macnaheedu yahay in shirkaddu aysan mas’uul ka ahayn waxyeello dhaqaale oo uu darawalku u geysto, oo ay ku jiraan.
Caadi ahaan, adeeg kasta oo loo qabto faa’iido wuxuu u baahan yahay caymis ganacsi, halkii uu ka noqon lahaa caymiska shaqsiga, iyo shirkadda caymiska bixisaa waxay bixisaa caymis ku saabsan khidmadaha shilalka iyo sheegashada – khatarta sare waxay ka dhigan tahay qiimo sare. Khatartu aad ayey u badantahay marka la wado kireysiga, sababtoo ah waqtiga wadada iyo maylka la wado ayaa ka badan, markaa waxaa jirta fursad badan oo shil ah. Si kastaba ha noqotee, inta badan wadayaasha Uber iyo Lyft ma awoodaan, mana qaadaan, ganacsi.
Marka, maxaa ku dhacaya darawal sababa shil intuu wado kireysi?
Party Dhinacyada dhaawacmay waxay sheeganayaan caymiska gaariga ee darawalka – waxyeelada hantida, dhaawaca jirka, ama labadaba. Waaxda sheegashooyinka shirkadda caymiska ayaa baareysa, oo markay ogaadaan in gaariga loo waday kiro, way diidi doonaan sheegashada. Dheeraad ah, shirkado badan ayaa sidoo kale baajin doona caymiska darawalnimada sababtoo ah qofka wadista kireynta ma uusan ixtiraamin shuruudaha heshiiska caymiska. Darawalku waa inuu ka bixiyaa jeebkiisa waxyeelada jireed iyo dhaawacyada, sidoo kale waa inuu dayactiraa gaarigooda qarashkooda.
Haddaba, maxaa xal ah?
Shirkadaha caymiska baabuurta ee gaarka ah qaarkood ayaa jawaab ka bixiyay. In kasta oo aysan bixinin caymis wadista kireynta siyaasaddooda, waxay abuureen oggolaansho lagu dari karo siyaasad, koror yar oo khidmad ah, oo kordhinaysa mas’uuliyadda adeegsiga ganacsiga. Qof kasta oo u kireysanaya kireysi waa inuu ku raacaa oggolaanshahooda siyaasaddooda, ama wuxuu ku xiran yahay natiijada kor lagu sharaxay haddii shil dhaco. Marka, haddii aad u wado Uber
PreviousQalalaasaha Itoobiya \_”Waxaan ahaa caqli xumo in aan rumeysnaa in Itoobiyaanku aysan la dagaallami doonin gudaha
NextDaboolida Qiimaha La Xiriira Dhalmada